Tonizia: Fifandonan’ny Mpitandro Filaminana Tamin’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Tsy An’asa Tao Radès · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2012 5:10 GMT
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Fanovàna tao Tonizia 2011 ity lahatsoratra ity.
Ny 13 Aprily, nifandona ny mpitandro filaminana sy ny vondronà tanora mpanao fihetsiketsehana avy any amin'ny Cité El Mallaha tany amin'ny seranan-tsambon'i Radès, atsimon'ny renivohitr'i Tunis ary raisina ho toy ny ambanivohitrany. Nanomboka tamin'io alina io ny fifandonana, Zoma ny andro, ary nitohy nandritra ny herinandro manaraka. Nanatanteraka fitorevahana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo, nitaky ny hizaràna ny asa sasany izay vao noforonina tao amin'ny seranan-tsambon'i Radès, akaiky ny Cité El Mallaha.
Nitifitra entona mandatsa-dranomaso an'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana, hanaparitahana azy ireo. Avy eo dia nisambotra azy ireo, eny fa na hatrany ambony tafon-trano aza. Voatàna ireo mpanao fihetsiketsehana sasany, izay nitarika hetsi-panoherana sy fifandonana ho lasa lavidavitra kokoa.
Nitranga andro vitsy monja taorian'ny nipoahana fifandonana mikasika ny asa [ar] tany amin'ny tanànan'i Moularès any atsimo sy ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo tsy an'asa nanao fihetsiketsehana tany Tunis izany fifandonana izany.
Mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny Cité El Mallaha any Radès. Sary avy ao amin'ny machhad.com (CC BY-NC-ND 3.0).
Nitoraka bitsika ny mpitoraka bilaogy Tounsiahourra:
Alina maimbo rà tany amin'ny Cité El Mallaha any Radès, ambanivohitr'i Tunis. Noravan'ny mpitanro filaminana ilay fitorevahana ary nampiasàn'izy ireo entona mandatsa-dranomaso izay nanempotra ireo mponina tany an-tranony ‎‪#Rades
Mangataka famotorana mikasika ny famoretana an'ireo mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny Cité El Mallaha i Sihem Ben Sidrine [mafana fo amin'ny zon'olombelona], sy ny fomba nidiran'ny mpitandro filaminana tany an-tranon'olona teny amin'ny manodidina, ary ny fampiasàn-kery natao azy ireo.
Mampiseho ny mpitandro filaminana manafika ireo araben'ny Cité El Mallaha any Radès ity lahatsarin’ i TunisByNightt manaraka ity:
Nihetsika tamin'ny alalan'ny fitoraham-bato sy coktails Molotov an'ireo mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana. Ary nitoraka bitsika ny mpitoraka bilaogy Haykel:
May tanteraka ilay tobin'ny mpitandro filaminana any El Mallaha, #Rades omaly #tunisie #tngov
Naneho ny tahony momba ny fitombon'ny fifandonana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana i Narjess, mpampiasa Twitter:
Ny fanontaniana mipetraka: hanitatra ny fepetra amin'ny tany misahotaka izay mifarana ny 30 Aprily ve izy ireo [ny governemanta]?
Nibitsika ny mpitoraka bilaogy Wessim:
Fahanginan'ny Median'ny fahitalavi-panjakana Toniziana mikasika ireo zava-nitranga tany amin'ny Cité El Mallaha, Radès
Nitsikera ny fahanginan'ny media i Tounsiahourra:
Raha mandrakotra ny Cité El Mallaha any Radès ny tentona mandatsa-dranomaso, nisafidy ny hanomboka ny vaovaom-paritra miaraka amin'ilay fizarana vaovaon'ny Hajj sy ny resadresaka miaraka amin'ny minisitry ny Raharaham-pinoana ny Fahitalavitr'i Tonizia
Nitoraka bitsika i Med Salah M'Barek:
10-15 km miala ny foiben'ny #TTN [Fahitalavi-panjakana Toniziana] i #Rades ary tsy nisy ekipa nalefa handrakotra ireo hetsika niseho ireo!!!
Mety ho tsy niraharaha ireo hetsika ireo ny fantson'ny fahitalavitr'i Tonizia, raha tsy toy izany kosa ny governemanta. Nanome rohy mankany amin'ireo sary navoakan'ny Minisitry ny Atitany tao amin'ny Facebook ny Talen'ny Global Voices Advocacy Sami Ben Gharbia ao amin'ny Twitter.